Qisada 5 ka mid ah dadkii ku dhintay qaraxii isgoyska Zoobe - Caasimada Online
Home Warar Qisada 5 ka mid ah dadkii ku dhintay qaraxii isgoyska Zoobe
Qaraxii 14kii bishan ka dhacay isgoyska Zoobe waxaa uu dhibaateeyay qoysas badan oo Soomaali ah, qoysaskaas oo ka tirsan qeybaha kala duwan ee bulshada. Haddaba waxaan warbixintan ku dadkii wax ku noqday qaar ka mid ah, innaga oo la kulanay ehaladooda, lana sheekeysanay, si ay wax uga sheegaan.
Qoraalkan hoose waxaa laga sameeyay Ganacasade, Caruur, Ardey iyo Saxafi goobta qaraxa ku dhintay, isku shaqo ma aheen, isma aqoon laakin qaraxa ayey ku dhinteen.
Axmed Cabdikarim Ciyow:
Marxuum Axmed Ciyow oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe waxaa uu ka yimid dalka Mareykanka, keliya 4 saac ayuu joogay Muqdisho, Hotel Safaari ayuu degay, waxaa uu ahaa 50 jir.
Maxamed Daahir Faarax oo ay saxiibo ahaayeen ayaa sheegay in uu dalka u yimid sababo la xiriira in uu ganacsi ka sameysto, laakin waxaa uu ku dhintay qolkiisa.
Marxuumka intii Mareykanka joogay waxaa uu ka qalin-jabiyay Metropolitan State University, waxaa uu lahaa xaas iyo 3 caruur ah.
Marxuum Cali Nuur Oo VOA Sawir-qaade u ahaa Ayaa Ku Dhintay Qaraxa Zoobe.
Bakar waxaa Cali Nuur walaalkii, waxaa uu ka sheekeeyay markii ugu war dambeysay iyo noloshiisa sida ay aheyd qaraxa ka hor.
“ Waaga markuu baryey gurigiisa wuu ka soo tagey, wuxuu yimid shaqadiisii ku meel gaarka aheyd ee xafiiskii VOA ay ku la heyd KM5 dhismaha Bisha Cas, meeshuu yimid halkaasuu ka shaqeynaayey Filim uu ka soo duubay magaalada oo VOA uu u diyaarinayey shaqadii isaga oo wato ayuu soo baxay meel maqaayada ayaan is kugu nimid, maqaayad ayaan ka qadeynay sideed saac iyo rubi markaay tahay waan qadeynay waan kala tagnay markaas ayaa is kugu keen dambeysay .
Maqaayadda markaan ka qadeynay shaqadiisa ayuu u laabtay aniga shaqeyda kale ayaan iska raacday, maray aheyd sagaal saac iyo labo iyo toban daqiiqo ayaan waxaan maqlay jug weyn ugu horreyn qofkii ugu horreeyay oo aan waco isaga ayuu ahaa nambarkiisa markaan wacana jaam ayaan ka arkay saan u raadinaayey xiriirkiisa iyo cid waliba u raadineysay, waxaan ogaanay in Cali Nuur uu ku dhintay xafiiska uu ka shaqeynaayey ee VOA ka deganeyd dhismaha bisha cas KM5 Zoope.
Waxaa uu ahaa Cameroman oo kaamiro ku shaqeysto wuxuu la shaqeynaayey mid ka mid ah shaqaalaha VOA yarka walaalkey ah qaabkaas ayuu u dhinty.
Wuxuu aad u jeclaa kaamiro maan iyo saxaafadda ayuu aad u jeclaa, wuxuu noqday kaamiro maan dhowr filimo oo uu soo duubay xitaa waan arkay anigu oo uu u diray VOA, wuxuu aad u jeclaa saxaafadda, howshii wuu helay si ku meel gaar ah ayuu ula shaqeynaayey VOA waxaa la yiri mardhow ayaa si sharci ah laguu shaqaaleysiin doonaa.
Waxaa uu lahaa xaas waxaa uuna dhalay saddex caruur ah labo gabdhood iyo halwiil hal gabar way ka saqiirtay hadda waxaa u jooga hal will iyo hal gabar”.
Aabo Cumar Xaaji Maxamed Oo Labo Caruur Ah Ku Waayey Qaraxii Zoobe:
Aabo Cumar waxaa uu meherad ku lahaa isgoyska Zoobe, waxaa xilliga uu qaraxa dhacayey gadayey labo caruurtiisa ah oo kala ah: Bashiir iyo Maryan, labadaba waa lagu waayey nolol iyo geeri.
Aabo Cumar waxaa uu ka waramay arrinta sida ay u dhacday“ alxamdulillaahi dhibaatadu waxay aheyd mid guud ma aheyn mid gaar ah oo wadanka dhan ayey masiibadu ku dhacday aniga waxaan ahaa in kastoo naafo ahay, hadana waxay ahay nin shaqeysan jiray ma aheyn nin fiiriya gacmaha bani’aadanka nin shaqeysto oo ilmihiisana u shaqeeyo reerkiisana u shaqeeyo ayaan ahaa.
Ilmaha iskuulaad ayey dhigan jireen qaarkood hadda ayey dhigtaan dugsiyada jaamacado qaar ayaa ii dhigto waxaan ahaa nin reerka dhan iyo baahiyadooda ilaahey la kaashto oo isku kalsoon ayaan ahaa.
Ilmaha kuwo lixaadkooda waa taam kuwana waa naafo aniga ayey iraaceen marka kuwii kuwa lixaadkooda taamka ahaa gabar iyo wiil ayey ahaayen waxayna dhigan jireen iskuul meeshii ayey qadartii ku qabsatay.
Aroortii ayey waxay I keeni jireen markaan soo wada quraacano meesha maheradda oo sandaqad aheyd iina saarnaa nuucyada kala duwan ee bagaashka sandaqadda waa aay kobocday Viiga caruurta halkaasi ayaan ka bixin jiray.
Maalintii sabtida aheyd waxaa dhacday meeshii ayey iigu yimaadeen waa ay ibadaleen guriga ayaan aaday markii ay tahay casirkii ayaan waxaa maqlay qarax anigoo gurigii joogo markii aan meeshii fiiriyana waa isgoyska Zoope, gabadhii iyo wiilkii raq iyo ruuq waa la waayey waxaa loo badinayaa inay geeriyoodeen”.
Marxuum Maryan Cabdullahi Maxamed Waxaa Ay Ku Dhimatay Qaraxa Zoobe Maalin Ka Hor Qalin-jabinteeda
Anfac Cabdullahi Maxamed oo ah Maryan walaasheed waxaa ay ka warantay walaasheed iyo rajadeeda.
“Magaceygu waan Anafac Cabdullahi Maxamed waxaan ahay walaasha Dr. Maryan Cabdullahi Maxamed oo ka mid aheyd dadkii ku dhintay 14 Oktober qarixii ka dhacay isgoyska Zoope, geerideeda waxay aheyd mid aad u xanuun badan markii si loo fiiriyo dadka waxay dareemayaan hal xanuun badanaa laakiin ani waxaan dareemayaa labo xanuun o ah inay maryan iga baxday oo aheyd walaasheen oo aad noo caawin jirtay iyo xanuun kale oo aan lawadaago dhammaan umadda Soomaaliyeed sidii uu u xanuujiy qaraxa.
Maryan geerideeda qoys ahaan waa aay nasaameysay, maxaa yeelay waxay aheyd gabadha kaliya oo hadda qalin jabineysay aabahey wali gabadhiisa oo qalin jabineyso ama ilmo uu dhalay oo qalin jabinayo ma uusan arag.
Maryan waxay aheyd gabdha kaliya oo uu aabe rajeynaayey inuu qalin jabinteeda uu ka qeyb galo, waxayna xafladeeda ay ku aadaneyd 24 tanka bishaan iyadoo dhameysay kulyaada caafimaadka.
Maryan walaaltinimada ka sokow waxay aheyd saaxiibtey aad iigu dhow waxyaabaha aan kawada sheekeysan jirnay waxay aheyd maadaama aan isku takhasusu aan baraneynay waxyaabaha aan ka sheekeysan jirnay waxaa ka mid ahaa sidii aan u horomarin laheyn caafimaadka bulshada gaar ahaan hooyada.
Aabe Cabdullahi oo Maryan aabaheed ah.
“Maryan waxay tiigsaneysay iney gaarto hadafkeeda oo ahaa waxbarashada oo ahaa inay ku soo baxdo dhaqtar buuxa reerka Anfacda iyadana is anfacda umadda Soomaaliyeedna anfacda marka si ay taas ku gaarto ayey iga codsatay inaan garab istaago gool ayaan ka gaarnay aniga iyo iyadaba tii ilaahey ayaa timid.
Aniga markaay wax dhacayeen waxan joogay waddanka Ingiriiska gaar ahaan garoonka socod ayaan ku soo jiray aniga oo aheyd ballanteeda inaan ka soo qeyb galo xafladda, waxaa la ii sheegayin Maryamo Cabdullaahi ay ku jirto dadka dhintay ka dibna sideedii subaxnimo maalintii axadda ayaa soo dagay meedkana aan wax ka aasay”.
Maryan Hooyadeed ayaa iyadaha nala hadashay:
“Maryan waxay aheyd qof wanaagsan oo ilaahey jacelyahay deriska uu jecelyahay inta bulsho la soo macaamishay qof aad loo jecelyahay ayey aheyd.
Qof walba oo la jecelyahay ilaahey ayaa naga jecel alxamdullilaahi qof ahlo qeyara oo ahlu sharafa ayey ahyed diinta ixtiraamka waalidka qof ilaahey siiyey ayey aheyd”.